ကလေးများ၌ ကိုလက်စထရောမြင့်မားနေခြင်း - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ကလေးကျန်းမာရေး » ကလေးများ၌ ကိုလက်စထရောမြင့်မားနေခြင်း
ကိုလက်စထရောမြင့်မားတယ်ဆိုတာ လူကြီးကိုရော ကလေးတွေကိုပါ အကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဒါဟာ ကလေးကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေအများကြီးကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ နှလုံးရောဂါပေါ့။
နှလုံးနဲ့ အခြားသော ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုသွေးထောက်ပံ့နေတဲ့ သွေးလွှတ်ကြောနံရံတွေမှာ Plaque တွေစုစည်းလာခြင်းဟာ ကိုလက်စထရောမြင့်မားခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတစ်ခုပါ။
နှလုံးရောဂါတွေနဲ့ လေဖြတ်ခြင်းတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်းနဲ့ နှလုံးဆီ သွေးမရောက်ခြင်းတွေဖြစ်စေတဲ့ အဖြစ်အများဆုံးအကြောင်းရင်းတစ်ခုလို့ Plaque တွေကို သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ကလေးဘ၀ ကိုလက်စထရောမြင့်မားခြင်းအန္တရာယ်က ဘယ်သူတွေမှာအရှိနိုင်ဆုံးလဲ။
ကလေးရဲ့သွေးထဲမှာရှိတဲ့ ကိုလက်စထရောလယ်ဗယ်ဟာ မျိုးရိုး၊အစားအသောက်၊ အ၀လွန်ခြင်း စတဲ့အချက်၃ချက်နဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ကိုလက်စထရောမြင့်မားတဲ့ မိဘရဲ့ ကလေးတွေဟာလည်း အများအားဖြင့်တော့ တူညီတဲ့အခြေအနေတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းရမှာပါ။
ကလေးတွေမှာ ကိုလက်စထရောလယ်ဗယ်မြင့်နေတယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ။
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေအတွက် ရိုးရှင်းတဲ့သွေးစစ်မှုတစ်ခုကိုလုပ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ကိုလက်စထရောကို စစ်ဆေးနိုင်ကြပါတယ်။
မိသားစုထဲမှာ နှလုံးရောဂါရှိနေသူတွေများပြားခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် ကလေးရဲ့ မိဘမှာ ကိုလက်စထရောမြင့်နေခဲ့ရင်တော့ စစ်ဆေးမှုကို မဖြစ်မနေခံယူဖို့ အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သွေးစစ်လို့ရလာတဲ့အဖြေဟာ ကလေးတွေမှာ ကိုလက်စထရောမြင့်တယ် မမြင့်ဘူးဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် ဆရာဝန်ကို ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
NHLBI လို့ခေါ်တဲ့ National Heart, Lung and Blood Institute နဲ့ အမေရိကန်ဆရာဝန်များအသင်းကတော့ ကလေးတွေအသက် ၉နှစ်က ၁၁အတွင်း နဲ့ အသက် ၁၇နှစ်ကနေ ၂၁နှစ်အတွင်း ၂ကြိမ် စစ်ဆေးသင့်တယ်လို့ အကြံပြုထားပါတယ။်
သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ အသက်၂နှစ် (၁၀နှစ်ထက်နောက်မကျဘဲ) စစ်ဆေးမှုခံယူဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ စစ်ဆေးမှုဟာ ပုံမှန်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် ၃နှစ်မှ ၅နှစ်အတွင်း စစ်ဆေးမှုပြန်လည်ခံယူဖို့ လိုအပ်လာပါလိမ့်မယ်။
ကလေးတွေမှာ ကိုလက်စထရောများနေတာကို ဘယ်လိုကုသမလဲ။
အ၀လွန်နေတဲ့ကလေးတွေနဲ့ သွေးတွင်းအဆီဓာတ်များနေသူတွေ ဒါမှမဟုတ် ကောင်းမွန်တဲံ ကိုလက်စထရောတွေ၊ HDL ကိုလက်စထရောတွေ နိမ့်တဲ့ ကလေးတွေဆီမှာတော့ အလေးချိန်ကို ပြန်လည်ထိန်းညှိခြင်းဟာ အဓိကအကျဆုံး ဖြေရှင်းနည်းလို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
ဆိုလိုတာကတော့ မိဘတွေဟာ ကလေးတွေကို အစာကောင်းကောင်းကျွေးယုံမက ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းသင့်နေပါပြီ။ ကိုလက်စထရော လယ်ဗယ်အရမ်းမြင့်တဲ့ ၁၀နှစ်နဲ့အထက် ကလေးတွေအတွက်ကတော့ ဆေးတွေလိုကောင်းလိုပါလိမ့်မယ်။
ကလေးတွေရဲ့ ကိုလက်စထရောလယ်ဗယ်မြင့်ခြင်းကို ကုသနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်ားသောက်စေခြင်းနဲ့ မိသားစုတစ်ခုလုံးပါဝင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း အစီအစဉ်ပါပဲ။
ကလေးတွေက fast food တွေနဲ့စာရင် အဆီနည်းစားစရာတွေကိုစားသုံးသင့်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်စားသင့်တဲ့ စုစုပေါင်းအဆီပမာဏဟာ နေ့စဉ်ရရှိမယ့် ကယ်လိုရီစုစုပေါင်းရဲက ၃၀% နဲ့ အောက်ပဲရှိရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီအကြံပြုချက်ကိုတော့ အသက်၂နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာ သုံးလို့မရပါဘူး။
ဒါ့အပြင် ပြည့်ဝဆီတွေကိုလည်း တစ်နေ့စာ ကယ်လိုရီစုစုပေါင်းရဲ့ ၁၀%သာ စားသုံးသင့်ပြီး trans fat ကတော့ လုံးဝရှောင်ကြဉ်ရမှာပါ။ အန္တရာယ်များတဲ့ အုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့ ကလေးတွေအတွက်ကတော့ ပြည့်ဝဆီတွေကို ၇%ထိသာ ကန့်သတ်ထားပြီး ကိုလက်စထရောကိုတော့ ပုံမှန် တစ်ရက်ကို ၂၀၀ မီလီဂရမ်ထိပဲ ကန့်သတ်လိုက်မှာပါ။
ဒုတိယအနေနဲ့ ကလေးအတွက် အာဟာရဓာတ်တွေ အကုန်ရရှိနိုင်မယ့်စားစရာအမျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်ထားဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါအပြင် ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။
အချို့သော ပုံမှန်အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ၊ ဥပမာ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ပြေးခြင်း၊လမ်းလျှောက်ခြင်း နဲ့ ရေကူးခြင်းတွေက HDL လယ်ဗယ်ကိုမြင့်တက်စေပြီး သင့်ကလေး နှလုံးရောဂါရနိုင်ချေကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကလေးရဲ့ ကိုလက်စထရောလယ်ဗယ်မြင့်တက်နေမှုကို ကုသရာမှာ အစားအသောက်နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း ၂မျိုးတည်းနဲ့ မရဘူးဆိုရင်တော့ ဆေးဝါးတွေ လိုအပ်လာနိုင်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇနျနဝါရီ 16, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇနျနဝါရီ 16, 2018
High Cholesterol in Children.
http://www.webmd.com/cholesterol-management/guide/high-cholesterol-children#2. Accessed April 24, 2016.
Cholesterol and Your Child. http://kidshealth.org/en/parents/cholesterol.html#
Accessed April 24, 2016.